Codka aamusan miyuu mudan yahay in la daawado? - Muuqaalka Cradle
1 Comment on Codka Aamusan Daawasho Wacan?
Filimka "Codka Aamusan" waxa uu soo xidhay abaal-marinno kala duwan, waxaana uu helay sumcad badan 4-tii sano ee uu soo baxay. Filimkan ayaa daba socda sheekadii gabar dhagool ah oo lagu magacaabo Shouko oo isku iskuul ku biirtay Shoya, taasoo bilawday inay u xoog sheegto maadaama ay ka duwan tahay. Waxa uu aadayaa ilaa uu ka tuuro dariishada oo uu xitaa dhiig ka keeno hal tusaale. Xoog u sheegashada waxaa dhiirigeliya oo kaliya Ueno, Shoya saaxiibkiis iyo qof jecel. Daawadeyaal badan ayaa ka hela dareenka filimka in tani ay tahay hal waddo hal waddo sheeko jacayl waa in ay ku lug leedahay labadaas jilaa, waxaad u maleyn kartaa inay ku saabsan tahay madax furashada ama cafiska. Hagaag ma aha, si fiican ugu yaraan maaha dhamaantood.
Sheekada ugu weyn ee Codka Aamusan waxay daba socotaa sheekada gabadh dhagool ah oo lagu magacaabo Shouko, taas oo lagu caayo dugsiga sababtoo ah iyada oo loo arko inay ka duwan tahay naafonimadeeda. Bilawga sheekada waxay isticmaashaa buug xusuus qor ah si ay ula xidhiidho ardayda kale iyada oo u sii maraysa inay su'aalo ku qorto buugga, Shoukona ay qorto jawaabaheeda. Markii hore waa Ueno oo ku maadsata Shouko buuggeeda xusuus-qorka dartiis, laakiin markii dambe Shoya, saaxiibkii Ueno ayaa ku biiray cagajuglaynta, isagoo ku majaajilooday Shouko isagoo xaday qalabka gargaarka maqalka oo tuuraya. Sido kale sida ay u hadlayso ayuu ku maaweeliyaa, maadaama Shouko aysan maqli karin dhawaqa codkeeda. Xoogsheegashadu way sii socotaa ilaa hooyada Shouko lagu khasbo inay cabasho rasmi ah u gudbiso dugsiga, iyadoo isku dayaysa inay joojiso cagajuglaynta. Shoya hooyadeed markay ogaatay hab-dhaqankiisa, waxay u soo gudubtay guriga Shouko iyadoo wadata lacag badan si ay ugu bixiso qalabka gargaarka maqalka. Shoya hooyadeed waxay raali galin ka bixisay magaca Shoyo waxayna balan qaaday in Shoya uusan waligiis ula dhaqmin Shouko mar dambe.
Shoya iyo Shouko ayaa kulmaya markii ugu horeysay tan iyo Fasalka 6aad.
Ka dib markii uu Shoya ka baxay dugsiga wuxuu ku biiray dugsiga sare halkaas oo uu ku dhacay Shouko wakhti dheer ka dib. Waxaa shaaca laga qaaday in ay ka tagtay iskuulkii ay dhiganeysay Shoya sida uu ula dhaqmayo awgeed. Way ka carartay oo oohin bilowday. Inta badan tani waa halka ay sheekadu ka bilaabmatay, muuqaaladii dugsiga cagajuglaynta ee horena waxay ahaayeen uun aragti hore. Sheekada inteeda kale waa Shoya oo isku dayaysa in ay ka dhigto Shouko iyada oo baratay luqadda dhegoolaha oo si tartiib ah uga digaysa iyada. Labaduba waxay si wadajir ah u wajahayaan caqabado badan, maadaama ay ku qosleen saaxiibkii Shoya, Ueno sababtoo ah xaqiiqda uu u xoogsheegtay iyada iyo Shouko hooyadeed, kuwaas oo aan aqbalin xiriirkooda cusub ama labadaba inay wada joogaan.
Shouko Nishimiya Waxa uu u shaqeeyaa sida jilaagii ugu weynaa oo ay weheliso Shoya. Laga soo bilaabo POV macalinka, way iska caddahay in dhammaan Shouko ay rabto inay ku qabato dugsiga inay ku habboon tahay oo ay ku biirto ardayda ay isku fasalka yihiin barashada iyo ku raaxaysiga nolosha dugsiga. Dabeecadda Shouko waa xishood iyo naxariis. Iyadu uma eka inay qofna la tartanto, oo guud ahaan waxay isku daydaa inay la qabsato, la heesto iwm. Shouko waa dabeecad aad u jecel waxayna u dhaqantaa hab aad u daryeel badan, taas oo adkeynaysa in la daawado marka la caayo oo lagu qoslo.
Shoya Ishida uma eka in uu dantiisa ka shaqaynayo oo si caadi ah u raacayo waxa qof kastaa samaynayo. Tani waxay badanaa dhacdaa qaybta hore ee filimka, halkaas oo Shoya ay ku sii wado cagajuglaynta Shouko. Shoya ma qaado mas'uuliyadda ficilladiisa ilaa inta uu ka qaan gaadhayo. Shoya waa tamar qayaxan oo qallafsan, in badana ka soo horjeeda Shouko. Xariif badan ma aha, sida caadiga ah waafaqaya waxa loo sheego.
Jilayaasha hoose ee Codka Aamusan waxa ay door muhiim ah ka ciyaareen horumarka sheekada dhexmartay Shoya iyo Shouko, iyaga oo siinaya taageero shucuureed labada jile oo u dhaqmaya sidii hab lagu saaro niyad jabka iyo kor u qaadida cadhada. Jilayaasha hoose ayaa loo qoray si aad u wanaagsan taasina waxay ka dhigtay kuwo aad u khuseeya, sidoo kale jilayaasha hoose sida Uneo, kuwaas oo kaliya la isticmaalay qadar yar intii lagu jiray qeybtii hore ee filimka si weyn ayaa loogu daray oo si qoto dheer loo siiyay dhamaadka dhamaadka. Arintan waan ka jeclaa filimka waxayna ka dhigtay jilaa kasta mid muhiim ah oo la xasuusan karo, sidoo kale waa tusaale cajiib ah oo ku saabsan horumarinta jilayaasha sida saxda ah ee filimka.
Dhammaan waxay si muuqata u muujiyeen astaamo hoosaadyo ka socda "Cod Aamusnaan ah"
Sheekada ugu weyn oo sii socota
Qeybtii hore ee filimkan ayaa muujinaya Shouko iyo Shoya taariikhi hore iyo sababtii uu ugu caga jugleeyay oo uu la falgalay markii hore. Waxa aad loogu farxay in ay rabtay in ay saaxiib la noqoto, tanina waxa ay sheekada ka dhigaysaa mid dareen badan leh. Muuqaalkii ugu horeeyay ee ka dib hordhaca Shouko iyo Shoya ee dugsiga si wada jir ah ayaa arkay labada Shouko iyo Shoya oo isku dhex yaacay dugsiga cusub ee ay dhiganayaan. Markii Shouko ay garatay inay Shoya hor istaagtay waxay isku dayday inay cararto oo ay qariso. Shoya ayaa la soo qabsatay oo u sharaxday Shiouko in sababta uu u baacsanayay ay ahayd in ay ka tagtay buug-yaraha. Ka dib Shoya ayaa mar kale isku dayay inuu arko Shouko laakiin waxaa joojiyay Yuzuru oo u sheegay inuu baxo. Sida iska cad tani waa tii ugu horeysay ee isku dayo xiriir ah oo Shoya uu ku doonayo inuu ku gaaro Shouko, waana halka filimka intiisa kale uu u horseedayo, iyada oo gacan muggeed oo kale oo muuqaalo hoose ah ay sidoo kale qalloocan tahay, taasoo ka dhigeysa mid aad u xiiso badan.
Ka dib filimka waxaan ku aragnaa Shoya oo la falgala Yuzuru xoogaa ka badan isagoo isku dayaya inuu u dhawaado Shouko. Wuxuu u sharxay xaaladdiisa Yuzuru waxayna noqotay mid aad ugu naxariisto isaga. Xilligan waa la soo gaabiyay si kastaba ha ahaatee markii Shouko hooyadeed ay ogaatay iyaga, oo ka hortimid Shoya oo ay wejiga ka dharbaaxday maadaama uu ogaaday inay tahay hooyadeed. Waxay u muuqataa in Yaeko xanaaqiisa Shoya uusan weli bixin. Sheekadu way sii socotaa oo markii dambe waxaan aragnaa in Shouko hooyadiis ay bilawday inay ka sii xumaato Shoya, sida aan aragno Shouko uma muuqato in uu dhib ka haysto isaga. Waa firfircooni aad u xiiso badan in la tixgeliyo waxaana hubaal ah in ay gacan ka geysaneyso dhisidda xiisadda u dhexeysa jilayaasha. Tani waxay ka timi inta badan Shoya hooyadeed oo doonaysa waxa u wanaagsan gabadheeda. Sababta ay sidan u dhaqmayso waxay u badan tahay sababtoo ah waxay rabtaa waxa u wanaagsan Shouko iyo haddii Shouko uu ku faraxsan yahay taasi waa dhammaan arrimaha muhiimka ah.
Sababaha Codka Aamusan Daawasho Wacan
Marka hore aan ku bilowno sababta cad, sheekada. Sheekada Cod Aamusan waa mid aad u wanaagsan balse taabanaysa. Waxay u isticmaashaa naafanimada gabadha dhegoolaha sida qaab dhismeedka sheekada oo dhan. Xaqiiqda ah in sheekadu ay ka bilaabanto muuqaalada cagajuglaynta ee bilawga filimka ka dibna ay u guuraan wakhtigooda Dugsiga Sare waxay sheekadu ka dhigeysaa mid sahlan in la raaco lana fahmo. Waxaan jeclaa fikradda guud ee filimkan, waana sababta aan go'aansaday inaan siiyo daawasho.
Sawirka & Animation
Muuqaalka guud ee animation ee Codka Aamusan waa neef qaadasho in la yiraahdo ugu yaraan. Ma odhan lahaa waxay la mid tahay tusaale ahaan Beerta Erayada, laakiin filim ka badan 2 saacadood waxa hubaal ah in uu u muuqdo mid cajiib ah. Waxay u egtahay in dabeecad kasta la sawiray ka dibna dib loo sawiray si qumman. Asalka qaybaha go'an ayaa aad u faahfaahsan oo qurux badan sidoo kale. Waxaan dhihi lahaa xitaa haddii filimku uusan jeclayn qaabka uu u eg yahay dhib kuguma ahaan doono, sababtoo ah t wuxuu u muuqdaa mid cajiib ah, shaqo badan ayaa dhab ahaantii gashay soo saaritaan taasna waxay aad uga caddahay qaabka uu u eg yahay. lagu sawiray.
Jilayaasha Xiisaha Leh & Xasuusta
Waxaa jiray jilayaal badan oo xusuus mudan oo ku jiray codka aamusan waxayna ugu horrayn door ku lahaayeen qaybta hore ee filimka, iyagoo doorkooda ku ciyaarayay sidii Shouko ay isku fasalka ahaayeen. Badankoodu run ahaantii kama qaybqaataan cagajuglaynta ee taa beddelkeeda way daawadaan oo waxba ma qabtaan. Waxay hadhow ka soo muuqan doonaan filimka, tani waxay noqon doontaa inay ka dhiidhiyaan dambila'aantooda markii la waydiiyo cagajugleyntii hore ee Shouko ee ardayda kale ee fasalka.
Dabeecada Ka soo horjeeda ee Haboon
Mid ka mid ah jilayaashan igu dheggan waa Uneo. Waxay caadi ahaan noqon doontaa mina kicinta cagajuglaynta laakiin sida caadiga ah waxay u dhaqmi doontaa iyada oo aan waxba galabsan waligeedna dhab ahaantii maaha inay qaadato mas'uuliyadda sababtoo ah tani caadi ahaan waxaa dabooli doona Shoya. Farqiga u dhexeeya Ueno ayaa ah in ardayda kale ay wada garteen in dhaqanka noocan ahi uu khaldan yahay, Uneo waxay sii waddaa inay soo bandhigto qaababkan xitaa Dugsiga Sare halkaas oo ay ku majaajilooto Shoya iyo Shouko labadaba. Waxay u muuqataa in ay ka cadhoonayso in qof kasta oo ku xeeran uu ka guuray in uu sidan ahaado oo uu Shouko ula dhaqmo sidan oo kale taasina waxa ay dareensiinaysaa nugul iyo hinaaso. Tani waxay aad u korodhay marka Shoya uu ku jiro isbitaalka.
Wadahadal & Luuqadda Jirka
Wadahadalka si wanaagsan ayaa loogu isticmaalaa Cod Aamusan, tanina waxay ka muuqataa muuqaallada intooda badan gaar ahaan muuqaallada luqadda dhegoolaha. Wadahadalku waxa kale oo loo habeeyey qaab aad u xog-warran oo taxaddar leh taasoo ka dhigtay mid aad u fudud in loo isticmaalo akhrinta luqadda jidhka ee jilayaasha. Waxaan si gaar ah u maleeyay in tani ay muhiim u tahay goobta buundada ee ku lug leh Shoya iyo Shouko maadaama ay runtii aad u soo jiidatay sida labada jilaa ay si fiican u dareemayaan iyo ujeeddooyinkooda dhabta ah. Hoos ka daawo lifaaqa oo waxaad arki doontaa waxaan ka hadlayo.
Astaanta & Macnaha Qarsoon
Waxaa jira arin kale oo si fiican looga fikiray filimkan kaas oo ah sida dadka naafada ah ay u furan yihiin xiriir/saaxiibtinimo. Tani kuma koobna kaliya dadka naafada ah, laakiin waxay la mid tahay kuwa aan lahayn muuqaal soo jiidasho leh ama aan sidaa ula dhaqmin sida Nagatsuka.
Qoto dheer ee dabeecadda & Arcs
Filimka oo dhan waxaan aragnaa jilayaal kala duwan ayaa si qoto dheer loo siiyay sidoo kale waxaan aragnaa jilayaasha qaarkood oo dhex mara qaanso dhan sidoo kale. Dadka qaarkiis waxay ku doodi karaan in tani ay suurtogal tahay oo keliya iyada oo loo marayo waxyaabo dheer oo taxane ah tusaale ahaan, laakiin gabi ahaanba waa suurtogal in filimka sida A Silent Voice, dhab ahaantii aad u badan sababtoo ah dhererka filimka. Tusaalaha wanaagsan ee tani waxay noqon kartaa Ueno, oo qaata wiilka doorka ka soo horjeeda ka dib qeybtii hore ee filimka. Weli waxay muujinaysaa xanaaqeeda Shouko xitaa wax badan ka dib filimka. Naceybkeeda bilowga ah ee Shouko wuxuu u muuqdaa inuu sii weynaanayo oo sii weynaanayo, si ka sii badan ka dib Shoya waa inuu aadaa isbitaalka ka dib markii uu badbaadiyay nafta Shouko. Si kastaba ha ahaatee, dhamaadka filimka waxaan aragnaa inay wax badan iska beddeshay.
Dhamaad Wacan (Spoliers)
Fikradayda dhamaadka Codka Aamusan wuxuu ahaa sidii loo baahnaa. Waxay soo bandhigtay dhamaadka quruxsan, iyada oo inta badan mashaakilaadka ka dhashay bilawga filimka la sifeeyay oo la xaliyay dhamaadka. Dhamaadka waxa kale oo ay arki doontaa qaar badan oo ka mid ah dhibaatooyinka kale ee ku yimid sababtoo ah iska hor imaadyo ka dhashay falalka Shoya oo la soo gabagabeeyay oo la soo afjaray. Tani waxay u ogolaatay taxanaha inuu ku dhammeeyo qoraal guud ahaan wanaagsan.
Sababaha Codka Aamusan Aanu Mudnayn In La Daawado
Dhamaadka qariibka ah (Qaswadayaasha)
Dhammaadka Codka Aamusan waxa uu bixiyaa dhammayn xiiso leh oo taageeraya gunaanad habboon sidoo kale. Dhammaadka waxa ay arkaysaa in badan oo ka mid ah jilayaasha ugu muhiimsan ee bilawga ah in ay dib u midoobaan oo isu yimaadaan inkasta oo ay jiraan khilaafaadyo ay ku lug lahaayeen filimka oo dhan. Jilayaasha sida Uneo iyo Sahara sidoo kale waxay sameeyaan muuqaal, iyagoo u mahadcelinaya oo raaligelinaya Shoya. Runtii ma hubo in iska horimaadkii yaraa ee u dhexeeyay Ueno iyo Shouko dhamaadkii uu ahaa mid xaasidnimo leh laakiin runtii iguma haboona aniga. Waxaan u maleynayaa inay fiicnaan laheyd haddii labadoodu ay kaliya sameystaan ​​​​oo ay noqdaan saaxiibo, laakiin malaha waxay ahayd isku day lagu muujinayo in Ueno uusan weli isbeddelin? Taasi waxay iila muuqan kartaa wax yar oo macno leh oo runtii ma fulinayso wax kasta oo la rabay in lagu soo gabagabeeyo jilayaalkeeda.
Intii lagu guda jiray qeybtii labaad ee filimka markii Shoya uu ku sugan yahay Highschool waxaan aragnaa isaga oo la falgala dhowr jilayaal kuwaas oo dhamaantood sheeganaya inay saaxiib yihiin, sida Tomohiro, tusaale ahaan, kaasoo ah taariikhda jilitaanka codka iyo guud ahaan joogitaanka aad ayey iiga careysiisay. Waxaan u maleynayaa in qorayaashu ay wax badan ka qaban lahaayeen jilayaalkiisa oo aysan ka dhigin mid aan la jeclayn. Aniga waxa uu ii soo baxay sidii guuldaraystayaashii baahan ee had iyo jeer ku laadlaada Shoya sabab la'aan oo aan ahayn "waa saaxiibo". Marna ma jirto wax sharraxaad ah oo ku saabsan sida ay labadoodu u noqdeen saaxiibo wanaagsan ama sida ay markii hore saaxiibo u noqdeen. Fikradayda Tomohiro dabeecaddiisu waxay lahayd wax badan oo ka hortag ah, laakiin qaar ka mid ah kuwan ayaa si cad loo isticmaalay.
Gabagabo Aan Dhameystirneyn (Qaswadayaasha)
Waan ku faraxsanahay soo afjarida Codka Aamusan laakiin waxaan dareemay in ay samayn karaan wax yar oo ka duwan xiriirka Shoya iyo Shouko. Waan ogahay in tani lagu balaadhiyey filimka iyada oo labadoodu ay waqti isla qaadanayaan iyagoo samaynaya hawlo kale oo kala duwan, laakiin waxaan dareemay in labaduba aysan dhab ahaantii helin dhammaadkii ay ahayd inay helaan, waxaan rajeynayay dhamaadka jacayl badan, laakiin wali aad ayaan ugu qanacsanahay dhamaadka asalka ah.
In ka badan 2 saacadood sheekada Codka Aamusan waa mid dheer. Sidoo kale waxay qaadan kartaa waqti dheer in la galo, inkastoo laga yaabo inaysan taasi dhicin daawadayaasha qaar sida haddii aad akhriday sharaxaadda filimka waxaad ogaan doontaa waxa filimku ku saabsan yahay. Tani waxay la macno tahay inay fududaan doonto in la fadhiisto qaybta hore ee filimka.
Socodka Codka Aamusan waa mid aad u degdeg badan taasina waxay adkeyn kartaa in lala socdo wax kasta oo socda. Sababta ugu weyn ee tani waa xaqiiqda ah in buug laga soo qaatay oo cutub kasta lagu sameeyay qaybo ka mid ah filimka. Tani waxay mararka qaar ka dhigan tahay in filimku uu u socon karo si ka dhaqso badan sidii uu ahaan jiray ka hor ama mustaqbalka, tani waa run muuqaalada cagajuglaynta inta lagu jiro qaybta hore ee filimka. Socodku aniga dhibaato gaar ah iguma ahayn laakiin wali waxay ahayd shay muuqata oo danaynayda kor u qaaday. Sidoo kale ma aan haysan sababo badan oo aan u daawado Codka Aamusan.
Codka Aamusan waxa uu bixiyaa sheeko taabanaysa dhammaad wanaagsan. Waxaa muuqatay fariin cad oo ku saabsan dhamaadka sheekadan. Sheekadan waxa ay dhigaysaa cashar qiimo leh oo ku saabsan cagajuglaynta, dhaawaca, cafiska iyo tan ugu muhiimsan jacaylka. Waxaan jeclaan lahaa in badan oo faham ah sababta Ueno ay uga cadhootay Shouko aad u badan iyo sababta ay u dhaqantay sida ay u samaysay xitaa ilaa dhamaadka filimka, waxaan u maleynayaa in taasi si fiican loo soo gabagabeyn karay ama loo sharraxay. Codka Aamusan wuxuu muujinayaa (si aad u wanaagsan) sida naafadu ay si xun u saameyn karto sharafta naftiisa, taasoo qofkaas ka sii fogaynaysa dadka ku xeeran.
Waxaan filayaa in ujeedada guud ee filimkani ay ahayd in la muujiyo saamaynta cagajuglaynta iyo soo bandhigida fariinta, iyo sidoo kale in la muujiyo awoodda madax furashada iyo cafiska. Haddi ay tani tahay ujeeddadu, Cod Aamusan ayaa si fiican u sawiray. Run ahaantii filimkan waan siin lahaa haddii aad waqti haysato, hubaal waa u qalantaa waxaanan hubaa inaadan isku arki doonin inaad ka shallaynayso.
Tags: anime animeblog muuqaal muuqaal ah codka codka aamusnaanta aasilentvoiceanime codad aamusan aasilentvoicefullview filimaan cod ah aasilentvoicemoviefullview aasilentvoicemoviereview dulmar codadka aasilentvoiceromanceanime waa cod aad u qiimo badan codka macaan ee mudan in la daawado waxa uu daawanayaa codka mudan filim dib u eegis cod dib u eegis Romanticanimetowatch shalliwatchasilent cod waa in la daawado codka macaan
Gelitaan Hore Anime 25-ta Jaceyl ee ugu sareysa ee aad ku daawan karto Netflix [Oo leh Clips]
Gelitaanka Xiga 10-ka Isbaanish ee Loogu Magac Daray Anime Si Aad Uga Daawato Netflix [Oo Aad Gasho Clips]